USA ama Dawlada Mareekanka ayaa amar kusiisay Madaxweyne Farmaajo inuu laheshiiyo ama raaligin kabixiyo waxa eey kiinya kula kaceen Dowlada soomaliya. - jornalizem
USA ama Dawlada Mareekanka ayaa amar kusiisay Madaxweyne Farmaajo inuu laheshiiyo ama raaligin kabixiyo waxa eey kiinya kula kaceen Dowlada soomaliya.
Dawlada Soomaliya ayaa falal dagaal ah geeysatay oo eey kulakacday maamulka Jubalaand Hadaba Dawlada Mareekanka iyo Dowlada Kenya ayaa Dana gaar ah kaleh Jubalaand iyagoo Kubaxshay Lacago aad ufarabadan sideey ciidanka utoobabaraan ina hubeeyaan oo kuladagaalamaan Alshabaab kuna ilaashaan Xuduuda Kenya.
Hadaba Farmaajo ayaa waxa uu sameeyey ayaa kaxanaajisay kiinya iyo Mareekanka hadaba mareekanka ayaa sirasma ah usoogalay oo ku amray Dowlada Soomaliya Madaxweynaheyda soomalya Farmaajo in Lagu amro ineey raaligalin kabixiso oo eey shir lagalaan sidee aminiga labada dowlad laskugu kaasho.
taa waxaa muuqaneysa in Jubalaand sii jireyso oo mareekanka kudhaganyahay
iyo keenya waxaa kuu cadeynaya Janan oo wali abaabul ciidan kawada Mandheera Kenya oo heegan gashay Kenya oo axmad madoobe iyo Macaaradiinta ayaa oo kenya lagu heshiinayo taas ayaa muuqata ineey kenya hadafkeeda gaadhay oo ah ineey Jubalaand jirto.